Sheekh Shaakir oo sheegay in loo awood sheegtay baaqna u direy Beesha Caalamka – Radio Baidoa
Sheekh Shaakir oo sheegay in loo awood sheegtay baaqna u direy Beesha Caalamka
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka Ahlusunna ee looga awood roonaadaya dagaalkii ka dhacay Dhuusamareeb ayaa isaga oo ku sugan Magaalada Garoowe waxaa uu soo saarey qoraal uu kaga hadlayo dagaalkii dhacay iyo khilaafkii kala dhaxeeyey Dowladda Federaalka.
War-Saxaafadeed uu soo saarey Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxaa uu ku sheegay in intii ay ku sugnaayeen Xero Inji ee Magaalada Dhuusamareeb la saarey cunaqabateyn,isla markaana la dul-dhigey Ciidamada dadka diidaya in la galo Xarunta lagana soo baxo.
Waxaa uu sheegay Sheekh Shaakir in xilli habeen ah Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen Xarunta ay ku sugnaayeen ee Inji,sidoo kalena ay jirtay cadaadis uu saarey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Ciidamada dowladda gaar ahana kuwa ay tababaraan Dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ee Haramcad iyo Gorgor ee loogu talo galay la-dagaalanka Al-Shabaab ayuu sheegay in dowladda ay kusoo weerartay Hoggaanka Ahlusunna.
War-Saxaafadeedka uu soo saarey Sheekh Shaakir oo aad u dheer ayaa waxaa uu sidoo kale ku sheegay hoggaanka Ahlusunna marnaba ka caajisi doonin la-dagaalanka Al-Shabaab ayna ka go’an tahay inay ka saaraan deegaannada ay kaga sugan yihiin Galmudug.
Ugu dambeyn Beesha Caalamka gaar ahaan Dowladda Turkiga ayuu ugu baaqay in Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay u tababarto ay ilgaar ah ku haayaan,isla markaana aan loo adeegsan arrimo siyaasadeed.
Madaxweyne Deni oo farriin u direy Hay’adaha Garsoorka Puntland
DHAGEYSO ,, KHEYRE ,,Haweenka Soomaaliyeed Halgan walba hormuud ayay u yihiin”